Taliska Ciidamada Xoogga Dalka oo ka hadlay baacsiga Al-shabaab | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Taliska Ciidamada Xoogga Dalka oo ka hadlay baacsiga Al-shabaab
Taliska Ciidamada Xoogga Dalka oo ka hadlay baacsiga Al-shabaab
Taliyaha qeybta 12 April ee Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed Cumar dheere oo la hadlay Radio Muqdisho Codka Jahmuuriyadda Soomaaaliya ayaa sheegay in Ciidamadu howlgaladii ugu dambeeyay in ay gacanta kusoo dhigeen dhagar qabayaal ka tirsan maleeshiyaadka nabad diidka ah ee Al shabaab.
Cumar dheere taliyaha 12 April ayaa tilmaamay in Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed la wareegeen deegaano kale oo ka mid kuwa isku xira Gobolada shabeelooyinka ayna gacanta ku dhigeen Ciidanku maleeshiyaad u dagaalamayay Al shabaab.
Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya ayaa wada didaalo guuda ahaanba Dalka looga saarayo maleeshiyada Al shabaab iyo sidii looga dulqaadi lahaa dhibaataynta ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay wali ku harsan yihiin Argagixisada Al shabaab.
Previous articleRa’iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya oo la kulmay Madaxwaynaha Dalka Masar.
Next articleRa’iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya oo la kulmay Madaxwaynaha Dalka Masar.+Sawiro